Nyefee Videos si iPhone ka iPad enweghị iTunes
E nwere ọtụtụ ụzọ nke na-ebufe faịlụ site na iPhone ka iPad. Tupu ya edozie on a usoro nke-ebufe videos mkpa ka ị mata onye na-bụ ngwa ngwa na-adaba adaba gị. Ị nwere ike videos na gị iPhone na ị chọrọ ịgbanwee ha ngwaọrụ gị dị ka a azụ elu. A oge ị chọrọ ele ha na gị na iPad ebe ọ mma na-ekiri ha a na ngwaọrụ. Ya mere olee otú ị ga nyefee ha? Anyị na-elekwasị anya n'isiokwu a bụ igosi gị otú ị nyefee videos si gị iPhone ka iPad site na iji Dropbox, email na ihe ọ bụla nke iTunes ọzọ.
Part1: Olee nyefee vidiyo si na iPhone ka iPad site na iji Dropbox
Part2: Olee nyefee vidiyo si na iPhone ka iPad site na iji email
Part3: Olee nyefee vidiyo si na iPhone ka iPad site na iji iTunes uzo ozo
Nkebi nke 1: otú nyefee vidiyo si na iPhone ka iPad site na iji Dropbox
Otu nke na-emeghe ojii nchekwa na i nwere ike iji nyefee gị faịlụ dị ka vidiyo bụ Dropbox. Nke a na ụdị nchekwa dị online n'ihi na ị na-echekwa gị videos, akwụkwọ, foto na Gburu. Dropbox-ahapụ gị ịkọrọ faịlụ n'ime gị synchronized ngwaọrụ dị ka iPhone na iPad. Na-amalite hụ na ị nwere Dropbox na gị iOS ngwaọrụ ahụ na-aga site nzọụkwụ ndị a
Nzọụkwụ 1 ẹkedori Dropbox na gị iPhone
Na Dropbox window on iPhone, na-aga bulite. Ị ga-ahụ + akara ngosi dị nnọọ enweta na ya.
Nzọụkwụ 2 Họrọ videos na gị iPhone
Ihe ndị a bụ maka gị iji họrọ videos na ga-agafere iPad. Enweta na gị Photos> Videos ma họrọ a nchekwa ebe ị ga-bulite ha.
Nzọụkwụ 3 bulite videos
Mgbe eke a nchekwa, bulite videos. Nke a ga-echekwa na faịlụ dị na mebere nchekwa na ga-enyere gị download si gị iPad.
Nzọụkwụ 4 Download videos gị iPad
Ugbu a na-atụgharị ị iPad na-emeghe Dropbox. Otú ọ dị, ị ga-enye ya mgbe a ga-uploaded tupu nbudata videos na gị iPad. Na gị iPad vidio ga-adị njikere maka download. Pịa na nchekwa kere na ịzọpụta videos na gị iPad.
Part 2: Olee nyefee vidiyo si na iPhone ka iPad site na iji email
Email-enye ohere otu izipu electronic ozi bụrụhaala na unu jikọọ a nkwurịta okwu na netwọk. Ị kwesịrị ị nwere mail adreesị na-enwe ike jikọọ na ndị ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị onye ị ga-edeba aha online. Na-enwe ike ịkọrọ faịlụ n'etiti gị iPhone na iPad hụ na ị rụnyere email ngwa na ma iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1 Open Email ya na gị na iPhone
Lelee gị mail ngwa gị iPhone na iPad. Hụ na gị na email na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 2 Open vidio na-relocated
Enweta na Photo ngwa na gị iPhone. Ugbu a enweta na video a kpọfere iPad na pịa na Share button ma họrọ Mail nhọrọ.
Nzọụkwụ 3 Họrọ onye nnata na ike ozi email
Mgbe ị na-ahọrọ nnata onye bụ gị, dee adreesị ozi-e. Ị nwere ike ịpụ na Dee ozi ma ọ bụrụ na ị ga-achọ ime otú ahụ. Pịnye ya na akụkụ dere ikpegara ozi. Mgbe i mere enweta na Send.
Nzọụkwụ 4 Open email na gị iPad na-azọpụta videos
Gị iPad ga-enweta nke a na ozi. Mepee ozi na enweta na Send video na-azọpụta ya. A demerit nke usoro a bụ na i nwere ike izipu nnukwu videos na oge.
Nkebi nke 3: otú nyefee vidiyo si na iPhone ka iPad site na iji iTunes uzo ozo
Ị maara na ị pụrụ nyefee videos si gị iPhone ka iPad enweghị na-eji iTunes? E nwere cutthroat mpi na mmepe nke transfer ngwa. Otu n'ime uzo ozo na i nwere ike iji bụ Wondershare-awụ ọsọ n'ugwu Go.
Nke a iTunes ọzọ ike ịnyefe a ogbe nke videos n'etiti iPad, iPhone na iPad n'enweghị mgbe retaining àgwà nke gị videos. Ọ ga-jikwaa gị media n'ọbá akwụkwọ. Ị nwere ike nweta nke a ngwa si ukara website nke Wondershare. E nwere free nzọ ụkwụ version ọ bụ ezie na ị ka nwere ike ịzụta.
Ebe a bụ Nduzi na otú iji ya.
Nzọụkwụ 1 Download na ẹkedori ngwa
Nke a ngwa-akwado ndị na iOS 5 iOS 9. Ya mere hụ na gị na ngwaọrụ ndị n'etiti ndị a na usoro.
Nzọụkwụ 2 jikọọ ngwaọrụ abụọ n'iji eriri USB
Njikọ gị iPhone na iPad-agba ọsọ ahụ Wondershare-awụ ọsọ n'ugwu Go.
Nzọụkwụ 3 Nyefee videos gị iPhone
Na ihuenyo nke ngwa ị ga gị iPhone. Pịa na Media mgbe ahụ Movies. Ọ ga-egosipụta niile videos. Họrọ ha na pịa Export. Mgbe ahụ họrọ iPad dị ka ebe.
Ọzọ Alternatives maka iTunes i nwere ike ịhụ ebe a: http://www.wondershare.com/itunes/free-alternatives-to-itunes.html
> Resource> Nyefee> 3 Ụzọ nyefee Videos si gị iPhone ka iPad enweghị iTunes